कोरोना भाईरस विरुद्धको अभियानमा हाम्रो संवेदनशीलता र सहकार्यको खाँचो
कतिपय अवस्थामा हामी विवेकहीन प्राणीजस्तै भएका छौँ र मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लगाएर सरकारलाई खिच्युँ गर्दै असहयोग गरिराखेका छौँ । यसले अन्ततोगत्वा आफ्नो काल आफैँ निम्त्याएका छौँ । किनकि, यो रोगले त तँ सरकारको विरोधी रहेछस् तँलाई त लाग्दिन अवस्य भन्दैन केरे । भीडभाडले त झनै यो रोग प्रशारणलाई मलजल दिनु सिवाय केही छैन ।
मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान शहरबाट शुरुवात भई विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) ले आजसम्म १९७ देशका जनताहरु यो रोगबाट आक्रान्त बनेका छन् । वल्र्डओमीटर (https://www.worldometers.info/coronavirus) को तथ्यांक अनुसार आजका दिनसम्म ४२३,४१३ जनामा यसको असर देखिएकोमा करिव १८,८१० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १०८,३८८ उपचार पश्चात आफ्नो घर फर्किसकेका छनभने बाँकी उपचारकै क्रममा छन् । अझै पनि १३,२६९ व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर अवस्थामा रहेको पाइन्छ र कति देशहरुमा नयाँ मृत्युको संख्या बढ्दो छ । तर पछिल्लो चरणमा चीनमा नयाँ मृत्यु हुनेको संख्याभने शुन्यमा झरेको पाइन्छ ।
हालसम्मको १,००० भन्दा बढी जनसंख्या मृत्यु हुने देशमा ईटाली (६,८२०), चीन (३,२७७), स्पेन (२,९९१), ईरान (१,९३४) र फ्रान्स (१,१००) रहेको छ । एकसय भन्दा बढी नयाँ मृत्यु हुने जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने ईटाली (७४३) अझै पनि अग्रपङ्तिमै छ र त्यसपछि क्रमश ः स्पेन (६८०), फ्रान्स (२४०), युएसए (१४५) र ईरान (१२२) पर्दछन् ।
यस्तै गरेर, छिमेकी देश भारतमा पनि ५३६ जना संक्रमित विरामीमा १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४० जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । अब नेपाल पनि यसमा अछुतो रहेन र अस्तिका दिनसम्म २ जना संक्रमितमध्ये एकजना उपचारपछि घर फकेको अवस्था छ र अर्को एकजना आइसोलेसनमै उपचारमा छन् ।
विगतमा चीनको सफलता र युरोपियन देशहरुको हेलचक्य्राईपनबाट शिक्षा लिँदै नेपाल सरकारले पनि यो समस्या बढ्न नदिन र विरामीहरुलाई उपचारको प्रबन्ध पनि मिलाउँदै लगेको अवस्था छ तापनि यो कार्य त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, यसबाट जोगिन बोर्डर सील गरे तापनि वा हिजो मंगलबारदेखि सरकारले “लकडाउन” गरी बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध, सवारी साधन बन्द, आन्तरिक हवाई उडान बन्द तस्ता कार्यहरु गरी मानिसहरुको आवतजातव तथा भीडभाडमा रोक लगाएता पनि हामीले यसलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौ । यसमा हामी जनता पनि संवेदनशील नबनी हेलचक्र्याईँ गरिराखेका छौँ ।
यो बेलामा हामी पार्टि विशेष भएर हिँड्नुभन्दा पनि समस्या विशेषलाई ध्यानदिन जरुरी थियो । तर कतिपय अवस्थामा हामी विवेकहीन प्राणीजस्तै भएका छौँ र मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लगाएर सरकारलाई खिच्युँ गर्दै असहयोग गरिराखेका छौँ । यसले अन्ततोगत्वा आफ्नो काल आफैँ निम्त्याएका छौँ । किनकि, यो रोगले त तँ सरकारको विरोधी रहेछस् तँलाई त लाग्दिन अवस्य भन्दैन के रे । भीडभाडले त झनै यो रोग प्रशारणलाई मलजल दिनु सिवाय केही छैन । त्यसैले, यस्ता कार्य जो कोहिले गरे तापनि उक्त कार्य रोकी समस्या समाधानमा एक भएर अगाढि बढ्नुको विकल्प छैन ।
अर्को कुरा हामी नैतिकता गुमेका प्राणीमा दर्ज भएका छौँ । कतिपय कुराहरु जानीजानी पनि बुझ पचाएका छौँ, कालाबजारीमा रमाएका छौँ र यो देश र यहाँको जनतालाई अहिले परेको सास्ति माथि सास्ति थप्ने काम गरेका छौँ । एकजनाको ठूलो गल्तिले धेरै व्यक्तिहरुलाई दुखदिँदै छौँ । नेपाल सरकारले एक हप्ताको लागिबन्द गरेर अत्यावस्यक काम बाहेक घरभित्रै बस्न भने तापनि हामी आन्दोलनको बेलामाकफ्र्यु तोडेझै ठाँटले बाहिर घुम्न रमाएका छौँ । अत्यावस्यक काममा जाने व्यक्तिलाई अनिवार्य परिचयपत्रको प्रावधान गरे तापनि हामी चेकजाँचमा खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई रुखो बोलीमा आफूनै सर्वेसर्वा जस्तै गरी अपहेलना गरिरहेका छौँ । उदाहरणको लागि पोखराको हिजो प्रहरीले चेकजाँचको क्रममा स्वास्थ्यकर्मी भन्ने महिलाले गरेको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । परिचय विना कसरी पहिचान गर्ने उ स्वास्थकर्मी महिला हुन भनेर ?
यस्तै गरेर, हामीले मास्कको अभावमा जेलिएका नेपालीलाई सेवाभावले निशुल्क मास्क पनि वितरण गरिरहेका छौँ । तर यहाँपनि हामी चुकेका छौँ । मास्क वितरण गर्दा कत्ति पनि स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेका छैनौँ । कतिपयले त केवल वितरणको लागि वितरण गरेका छौँ । किनभने, हामीले मास्कलाई खुला सडकमा धेरैजनाको भीडभाडमा कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुराको हेक्का राख्न सकेका छैनौँ । यसको अलावा, हामी कतिपय मास्क वितरण गर्ने व्यक्तिले मास्कनै नलगाई वा लगाए पनि मुख खोलेर वा मास्कको बीच भागमा हातले च्याप्प समाएर वितरण गरिराखेका छौँ । अर्को कुरा मास्क लगाउने तरिका वा सावधानीको बारेका केही बताउँदैनौँ । अनि प्रयोगकर्ताले पनि डोरीमा समाएर लगाउनुको सट्टा च्पाप्प मास्कको बीचभाग मै समाएर लगाउन थाल्छन् । यो यथार्थ हो । हामी पनि कोरोना भाइरसको समस्या पूर्व यसरी नै लगाउँदै आएका थियौँ । यदि मास्क वितरक आफैँनै वा त्यो सडकको भीडमा कुनै व्यक्ति संक्रमित रहेछ भने त्यसरी वितरण गरिएको मास्क झनै घातक हुन जान्छ । अझ कतिपय देशमा त मास्क वितरण गर्ने व्यक्तिले मास्कमा लठ्याउने विषादी राखेर वितरण गर्ने र पछि त्यहि मास्क वितरण गर्ने व्यक्तिले उसले दिएको मास्क लगाउने व्यक्तिलाई लुटेको अवस्था पनि देखिन्छ । त्यो घट्ना नेपालमा पनि नहोला भनेर भन्न सकिन्न । यसरी वितरण गरेको अवस्थामा राहत भन्दा पनि आहत हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले, यो भद्रगोल किसिमले मास्क वितरण गरिनु भन्दा पनि एक प्रभावकारी किसिमले जिम्मेवारीपूर्वक वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
अर्को कुरा मास्क तथा स्यानि टाइजर जस्ता सामग्रीका लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर वामूल्य बढाएर कालो बजारीमा वा कोरोनाले पिल्सिएको अवस्थामा रमाउँदै होली खेल्दै छौँ । कोरोना भाईरस लाग्नु अघि रु. ८५ मा पाइने स्यानिटाइजरको मूल्य अहिले रु. १२५ पुगिसकेको छ । यो कस्तो लुटतन्त्र ? यो हाम्रो कस्तो मानवता ? कस्तो शिक्षा? कस्तो क्रुरतापन ? किन हामी यस्तो जटिल समस्यामा पनि कत्ति संवेदनशील बन्न नसकेका ? हुन त कस्ता कस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरु छताछुल्ल हुँदा पनि कारबाहि प्रक्रिया कुन कोठरीको सन्दुकमा बन्दक हुन पुग्छ थाहा हुँदैन भने यो नाथे त के हो र ? तर जे होस् यस्ता कार्य गर्ने जो भएपनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न र कडाभन्दा कडा कारबाहिको दायरामा ल्याउनै पर्छ । हैन भने दिनप्रतिदिन देशमा अराजकता बढ्दै जानेछ, जुन छिप्पिएर जरा गाढिसकेपछि उखलेर फाल्न निकै नै गाह्रो हुन्छ ।
हामी अहिले कोरोना भाईरको कारण एक संगीन मोडमा उभिन पुगेका छौँ । अलिकति मात्र पनि हेलचक्र्याईँ गरेको खण्डमा यसले हाम्रो गाँस, बास र सास लुट्ने छ । त्यसैले, हामी सबैले संयमित, अनुशासित भएर एकीकृत रुपमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा ईटाली लगायत अन्य युरोपियन देशहरुले झेलेको भन्दा चर्को समस्या झेल्नुपर्नेछ । किनकि, उनीहरु सम्पन्न देशको त हालत त्यो भयो भने हामी त के हो र । त्यसैले, सावधानीपूर्वक कोरोना भाईरस विरुद्ध चीनले चालेको कदमको सिकाईलाई हामीले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । जस्ले गर्दा बढी धनजनको क्षतिविना नै हामी सबै सुरक्षित, सफल र खुसी रहने छौँ ।
कुनै महाव्याधि आउन सक्नेबारे वर्तमान अमेरिकी सरकारलाई धेरैचोटि चेतावनी दिइएको…
महासंकट पछिको सुखद् महाएकता